chandu2007.blogspot.com: 8/1/09 - 9/1/09
मेरो देशको पुस्तकका पृष्ठहरु
ठाउँ-ठाउँमा च्यातिएका छन्।
यसलाई पढ्ने मेरो बालकहरुले
अवश्य 'यो त भएन बा!' भन्नेछन्।
यसका पन्नाहरुको अक्षर नै मेटिने गरी
ठाउँ-ठाउँमा कालो मसी पोखिएको छ!
अवश्य 'यो त नराम्रो भो बा!' भन्ने छन्!
अनि म बाझोँले बादललाई झैँ हेरिरहुँला
-तिनीहरुले ती चौटाहरु ल्याएर जोडेको!
दागहरु माझेर पुस्तक सफा पारेको!
हो, मेरो देशको पुस्तकका पृष्ठहरु